काम गर्ने कालू-मकै खाने भालु ~ brazesh
काम गर्ने कालू-मकै खाने भालु
April 10, 2011 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
बायाँ फन्को ५६
एकएक वटा फूल चहारीचहारी मौरीले आफ्नो चाकामा मह बनाउँछ । जंगली भालुले त्यो चाकामा हमला गरेर विचरा मौरीको मेहेनत खाइदिन्छ । त्यसैलाई उदाहरण बनाएर कसैले गरेको मेहेनतको अरु नै कसैले आरामले बसेर फाइदा उठाउनेहरुका लागि हाम्रा पितापुर्खाले एउटा उखान बनाएका थिए, काम गर्ने कालू ( मकै खाने भालु । अहिलेको समाजमा पनि चारैतिर ध्यान दिएर हेर्ने हो भने यस्ता भालुहरुको कमी देखिंदैन । हरेक क्षेत्रमा अरुको मेहेनतको मह चाट्नेहरु छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् । हुन पनि हो, दुखै नगरी गर्जो टर्छ भने किन टाउको दुखाउने ? नैतिक रुपमा आफूलाई यो प्रश्न गर्न छोडिदिने हो भने मकै खाने भालु बन्न गाह्रो पनि त छैन नि ।
अर्काको घरजग्गालाई आफ्नो भन्न सकिन्न, त्यसका लागि स्पष्ट ऐन कानून हुन्छन् । तिनलाई काट्न सकिन्न । त्यस बाहेकका अरुका अन्य भौतिक सम्पत्तिलाई पनि आफ्नो भन्न पाइन्न, भोगचलन गर्न पाइन्न । तर वौद्धिक सम्पत्ति भनेर भनिने कला, साहित्य र सङ्गीत जस्ता सिर्जनाको कुरामा भने निश्चित नियम कानून नभएका कारण र भएका पनि विवादास्पद हुनाले मकै खाने भालुहरुका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको देखिन्छ । बेलाबेला दुइ थरि श्रष्टाहरु भिडिरहेका समाचारहरु यसैको प्रतिफल हामीले सुन्न पढ्न पाउने गरेका हौं । कसैको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि प्रतिलिपि अधिकार भन्ने कुराको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विश्वका विकसित मुलुकहरुमा यो अधिकार दह्रोसंग स्थापित भैसकेको छ भने हाम्रो देशमा बल्ल यसको लागि पहल हुन थालेको छ । प्रतिलिपि अधिकारको कुरामा जनचेतना फैलाउनका लागि सर्जकहरु आमसंचारका माध्यमहरुबाट निकै ठूलो आशा राखेर बसेका हुन्छन् । तर, तिनै आमसंचारका केही माध्यमहरुलाई कालू बनाएर अरु आमसंचारका भालुहरु मकै खाइरहेका छन् । रमाइलो कुरा त के भने अरुको बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन नदिनका लागि सचेत यी माध्यमहरु आफ्नै बौद्धिक सम्पत्ति हिनामिना भएको थाहा नपाएर अथवा थाहा पाए पनि आँखा चिम्लेर, कान थुनेर र मुखमा ताल्चा लगाएर बसेका छन् ।
गर्मीको मौसममा पानीको आहालमा फस्टाएका लामखुट्टेका फूलजस्ता एफ. एम. र टेलिभिजन च्यानलहरुमध्ये केही आजकल मकै खाने भालु बनेका छन् । एकाबिहानै झिसमिसेमा नै यिनले बजारमा आएका जति पत्रपत्रिका बटुलेर तिनमा छापिएका प्रमुख अनि रोचक समाचारहरु अक्षरश पढेर सुनाइदिने गर्छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र ? बिना कुनै संकोच उनीहरु आज फलानोफलानो पत्रिकामा यसो भनेर छापिएको छ भन्ने घोषणा पनि गर्वका साथ गरिदिन्छन् । यहाँ नेर सोच्नु पर्ने कुरा के हो भने के पत्रपत्रिकामा छापिएका समाचार सामाग्रीहरुमाथि तिनका प्रकाशन गृहहरुको कुनै अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै पनि समाचार छापिनु पछाडि त्यसमा कति मेहेनत परेको हुन्छ ? कुनै स्ट्रिंगर वा समाचारदाताहरुले त्यो समाचार संकलन गर्न, लेख्न र सम्प्रेषण गर्नका लागि शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम गरेका हुन्छन् । त्यसपछि त्यसलाई पढ्ने, सम्पादन गर्ने र परिमार्जन गर्नेहरुले परिश्रम गरेका हुन्छन् । अनि पत्रिकाको पानाको आकारप्रकारमा त्यसलाई अटाउनका लागि सजाउने डिजाइनरहरुले परिश्रम गरेका हुन्छन् । हिज्जे, व्याकरण र शुद्धाशुद्धि हेर्नेहरुले परिश्रम गरेका हुन्छन् । त्यसपछि छाप्ने मान्छेले, छापिएर आएपछि त्यसलाई घरघरमा, बजारबजारमा पु¥याउनेहरुले परिश्रम गरेका हुन्छन् । अनि मात्र पाठकहरुले तातोतातो चियाको सुर्को संग ती पत्रिका र तिनमा छापिएका समाचार सामाग्रीहरु पढ्न पाउँछन् । ती सबै परिश्रम गर्ने मानिसहरुलाई प्रकाशकले तलव खुवाएको हुन्छ । त्यो खर्चको लगानी उसले पत्रपत्रिकाको विक्री र विज्ञापनहरुबाट उठाउने हो ।
आम मानिसहरुका लागि आजको युगमा विहान पत्रिका पढ्ने भनेको आवश्यकता, बानी, अझ भनौं भने लत भैसकेको हुन्छ । सूचना र ज्ञानका लागि हाम्रो अभिन्न खुराक बनिसकेका छन् पत्रपत्रिकाहरु । यहाँ नेर सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने, एउटा रेडियो वा टिभी स्टेशनबाटै सबै पत्रपत्रिकाका प्रमुख र रोचक समाचारहरु आँखा खोल्न नपाउँदै सुन्न र बिछ्यौनाबाट ओर्लन नपाउँदै हेर्न पाइन्छ भने त्यसपछि गएर पसलमा त्यो पत्रिका किन किन्ने ? घरमै पत्रिका आउनका लागि पनि तपाईं ग्राहक किन बन्ने ? के यसले विक्रीमा असर गर्दैन होला ? त्यसो भयो भने विज्ञापनमा असर गर्दैन होला ? त्यो सब नगरे पनि के कसैको हक अरु कसैले उपभोग गर्न पाउँछ ?
रेडियो टिभीले समाचार प्रसारण गर्ने हो भने आफै संकलन, सम्पादन र प्रसारण गर्नु पर्छ । त्यसका लागि आर्थिक र बौद्धिक लगानी आवश्यक हुन्छ, त्यो गर्नु पर्छ । तर, अरु धेरै मानिसका परिश्रमको प्रतिफललाई सिन्को नभाँची आरामले कुर्सीमा बसीबसी पढेर आफ्नो आधा घण्टाको कार्यक्रमको गर्जो टार्ने अल्छी रेडियो र टेलिभिजन च्यानलहरुलाई के भन्ने ? अनि उदेक लाग्दो कुरा त के हो भने ती पत्रपत्रिका पनि मौन छन् जसका समाचार सामाग्रीहरु अरुहरुले निर्विवाध प्रयोग गरेर आफ्ना कार्यक्रम अवधि भरिरहेका छन् ।